Mina Reap cambodia - indawo, amahhotela, isimo sezulu, isikhumulo sezindiza, izinto okufanele zenziwe
I-Sod Reap, eCambodia
I-Mina Reap iyidolobha elikhulu lesifundazwe sase-Mina Reap enyakatho nentshonalanga yeKhambodiya. Yidolobhana elithandwayo futhi isango lesifunda sase-Angkor.
I-Mina Reap namuhla njengendawo ethandwa izivakashi inamahhotela amaningi, izindawo zokungcebeleka, izindawo zokudlela, namabhizinisi ahlobene kakhulu nezokuvakasha. Lokhu kukweleta kakhulu ukusondela kwawo kumathempeli wase-Angkor, okuheha ukuvakasha kwezivakashi eCambodia.
Ukuphi i-Mina Reap?
I-Mina Reap, ngokusemthethweni i-Minareap yisifundazwe saseCambodia, esisenyakatho nentshonalanga neCambodia. Imingcele ezifundazweni zase-Oddar Meanchey enyakatho, i-Preah Vihear neKampong Thom empumalanga, iBattambang eningizimu, kanye neBanteay Meanchey ngasentshonalanga. Inhloko-dolobha yayo nedolobha elikhulu kunayo yonke iSi Reap. Yisikhungo esikhulu sabakhenkethi eCambodiya, njengoba kungumuzi osondele kakhulu kumathempeli aziwa kakhulu e-Angkor
Kungani uvakashele i-Mina Reap?
Okokuhlaza, indlela yokuphila namasiko. Kepha isizathu esiyinhloko sokuza e-Mina Reap ukuhambela amathempeli amahle kakhulu e-Angkor Wat, isikhumbuzo sezenkolo esikhulu kunazo zonke emhlabeni, esizeni esilinganisa amahektha e-162.6. Ekuqaleni eyakhiwa njengethempeli lamaHindu elalinikezelwe kunkulunkulu uVishnu woMbuso WaseKhmer, laguqulwa kancane kancane laba yithempeli likaBuddha ngasekupheleni kwekhulu le-12th.
Ingabe i-Mina Reap iphephile?
ISena Reap cishe iyindawo ephephe kunazo zonke eCambodia. Sekuphenduke indawo yabavakashi futhi ikhuthaza ngokufanele. Ngenkathi ubugebengu obuncane abujwayelekile ngeshwa akuyona into engajwayelekile, uma umuntu enengqondo ngabo ngabo omunye uzobe ephephile.
Isikhathi esingakanani ukuhlala e-Mina Reap?
I-Siem Reap ayikwazi ukumbozwa ngosuku olulodwa. Uzodinga okungenani izinsuku ezintathu noma ezine ukumboza umkhathi omkhulu wamathempeli e-Angkor nezinye izinto ezikhangayo endaweni.
Ukuvakashela nini i-Mina Reap?
Ama-ejenti wokuhamba ngentshiseko azokutshela ukuthi asikaze sibe nesikhathi esibi sokuvakashela i-Mina Reap. Yiluphi uhlobo lweqiniso, inqobo nje uma uvumelana nezimo nendlela osisebenzisa ngayo isikhathi sakho uma usufika lapha.
Isizini eyomile iqala ngo-December kuya ku-Ephreli, kanti inyoni esukela ngoMeyi kuya kuNovemba iletha isimo sezulu esimanzi kanye nomswakama ophezulu.
Isikhathi esihle sokuvakashela i-Siem Reap kungoDisemba nangoJanuwari, lapho izinsuku ziba nelanga futhi zomile. Vele wazi ukuthi lesi yisizini yezivakashi, ngakho-ke uzoyithola igcwele kakhulu kuyo yonke indawo futhi amanani azoba ngaphezulu.
Kude kangakanani lolwandle kusuka e-Mina Reap?
ISiem Reap ayinalo ugu. Amabhishi aseCambodia avame ukunganakwa ngenxa yamaThailand. Kepha kancane kancane, ngokuqinisekile, iziqhingi ezinhle zaleli zwe nesihlabathi esikhanyayo esimhlophe saseSihanoukville ziyaziwa ngabathandi basemabhishi omhlaba.
Ibanga elisuka eSky Reap liya eSihanoukville liqonde 532km (350 miles) ngomgwaqo. Kungenxa yalokhu kudluliswa kwebanga elide (amahora we-10-15 ngomgwaqo) ukuthi abahambi abaningi bakhetha ukungayi eSihanoukville nhlobo. Inketho esheshayo ukuthatha indiza, ethatha ihora le-1.
Phakathi kwezindawo ezimbili ezidumile eCambodia, i-Mina Reap ibukeka njengendawo engcono yokuthatha umhlalaphansi. Ngenkathi i-Phnom Penh imele ushintsho, i-Mina Reap ithumba umongo wokulondolozwa. ISeo Reap ingahle ibonakale njengedolobhana elinamanzi emuva uma liqhathaniswa nePhnom Penh mayelana namathuba okuhweba.
Mina ukuvuna nge-phnom penh: 143 miles (231 km)
Lapho usuka ePhnom Penh uya e-Mina uvuna unezinketho ezihlukile ze-4:
Ungathatha ibhasi - amahora angu-6
Chitha imali ethe xaxa uthathe itekisi - amahora angu-6
Bhuka indiza - imizuzu engu-50
Thatha isikebhe esiwela iTonle Sap Lake- 4 ukuya emahoreni e-6
I-Mina Reap eThailand
Ibanga lokuhamba ngeBangkok cishe li-400 km.
Phakathi kwale mizi kusebenza izinkampani ezithile ezinokwethenjwa zamabhasi, futhi ungathatha:
Ibhasi eliqondile ukusuka e-Mina Reap liya e-Bangkok. (I-6 kuya emahoreni e-8)
Bhuka indiza - ihora elingu-1
I-Sod Reap eya eVietnam
Ibanga lokuhamba usuka eSaigon uye eSiap Reap cishe nge-600 km ngezwe.
Ukusuka eHo Chi Minh ungahamba:
Ngebhasi (amahora angu-12 kuya kwangu-20, kuya ngokuma ePnom Penh)
Ungabhuka indiza eqondile (ihora le-1)
Amahhotela eSky Reap
Kunamakhulu amahhotela e-Mina Reap. Ngokwesiko noma kwesimanje, ngesabelomali esincane noma esingenamkhawulo, kusuka endlini yezivakashi kuya ehhotela lezinkanyezi le-5, wonke umuntu uzothola injabulo.
Isikhumulo sezindiza i-Mina Reap
Ikhodi yesikhumulo sezindiza esivuna i-: Rep
kusuka esikhumulweni sezindiza kuya e-Angkor Wat: Amaminithi we-17 (5.8 km) nge-Airport Road
kusuka esikhumulweni sezindiza kuya enkabeni yedolobha: Imizuzu engama-20 - 25 (amakhilomitha ayi-10)
Lapho uhamba ibanga le-9km usuka kwisikhumulo sezindiza sase-Mina Reap uye enkabeni yedolobha, unezinketho ze-3:
siem airport airport